Bil kaddib mamnuucista Qaadka ee UK - BBC Somali
Bil kaddib mamnuucista Qaadka ee UK 24 Luulyo 2014
Maanta waxaa muddo bil ah laga joogaa markii Qaadka laga mamnuucay Britain. Haddaba waa sidee xaalka dadkii cuni jiray? Maxaa isbeddel ah oo ku yimid? Dood arrintaasi ku saabsan ayaa Farhan Jimale uu ugu qabtay London qaar ka mid ah raggii cuni jiray.
Goolhaye Jaylaani oo BBCda uga warramay waayihiisii ciyaaraha
Maxaa laga filan karaa xafladda caleema saarka Donald Trump?
Xaaladda ganacsiga Soomaalida Kisumu ee dalka Kenya
Abaar saameysay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya
Galdogob: Caro ka dhalatay gabar la kufsaday
Qaramada Midoobay oo ka digtay macluul ka dhacda Soomaaliya